Ny karazana ovy malaza indrindra: "kintana" amin'ny vanim-potoana 2020 - magazine "Potato System"
Eo am-baravaran'ny lohataona dia kely ny fotoana sisa tavela alohan'ny fambolena, ary maro ireo mpamboly ovy no efa nanapa-kevitra hoe iza amin'ireo karazany hofidina amin'ity taona ity. Tena ilaina izany Amin'izao fotoana izao dia nangataka ny mpamokatra ara-pambolena izahay hampandre an'i Andrei Kiselev, filohan'ny fizarana Potato Seeds ao amin'ny AgroAlliance-NN LLC.
- Miorina amin'ny faritra hatrany ny safidin'ny karazany. Ny toeram-pambolena any atsimo (Rostov Region, Krasnodar territory) dia maniry ny hamboly Colombus sy Red Scarlett tany am-boalohany. Ao amin'ny faritr'i Astrakhan, mitovy amin'ny Red Scarlett mitovy ihany ny vokatra tsara, takiana ny Riviera, Arizona, ary Memphis. Ireo karazany rehetra ireo dia mamela anao hahazo vokatra tsara faran'izay haingana.
Any amin'ny faritra afovoany, matetika ny mpamboly dia mamboly an'i Gala, Vega, Colomba, Red Scarlett, Queen Anne, Madeira, Baltic Rose.
Moa ve ny fampanantenany ny hamafy karazana "fotsy" na "mena"?
- Ny toeram-piompiana Rosiana dia tia ny potiosy "fotsy", inoana fa amidy kokoa izy ireo. Amin'ny salanisa, ny karazany fotsy-blond dia misy 75-80% amin'ny tsipika. Fa ny hoditra mena dia tokony ho eo koa mandritra ny taona maro, misy taona izay izy ireo no "mitifitra".
Ny karazana loko mena be mpitia indrindra dia Red Scarlett?
- Eny, an-taona maromaro ny laharana. Raha ny marina, dia mbola sarotra ny mifidy karazana izay afaka mifaninana aminy amin'ny lafiny rehetra. Na dia misy safidy mahaliana ao an-tsena aza, mazava ho azy. Amin'ireo efa voatanisa ao dia hofantariko ny Memphis, tsy vao maraina toy ny Red Scarlett izy io, fa manome vokatra be dia be, fandeferana amin'ny haintany ary mety ho fitahirizana maharitra. Ary ankoatry ny, tena mahaliana ny mpividy - izany dia ovy voatabia misy loko matevina sy hoditra tsara tarehy mamirapiratra.
Marihiko ihany koa i Baltic Rose - mampiseho tsara izany eny an-tsaha, dia ilaina amin'ny manasa, ary manana fahafaha-miditra amin'ny vondrona isan-karazany mpitondra ao amin'ny firenentsika.
Ary ny bebe kokoa momba ny fotsy-blond?
- Voalohany indrindra, ity dia Gala. Ny karazany isan-karazany dia mamboly, mitombo amin'ny faritra maro. Ny foto-kevitry ny teknolojia fambolena dia manome voka-boa tena tsara. Tsarao ny tenanao: raha ny vidin'ny tsenan'ny ovy dia 8 rubles / kg, avy eo amin'ny Gala dia atolotr'izy ireo 9-10 rubles / kg. Vega dia tsy dia fantatra loatra, karazany maro be mandefitra amin'ny haintany.
I Madeira dia tena mahaliana: an-tsaha fambolena antonony, tsara tarehy - marevaka ny voatabia, mitovy amin'ny oval - mety amin'ny manasa.
Ary mazava ho azy, Colomba dia karazan-jaza aloha no manome kalitao tsy miovaova. Ny paty dia mety amin'ny fanasana, toa tsara tarehy fonosana, fonosana foana amidy amin'ny fivarotana mpivarotra.
Nandritra ny ririnina mafana tamin'ity taona ity, dia maro ny manampahaizana milaza fa mila miomana isika amin'ny fanafihana ny peste sy ny aretina. Tokony hojerena ve io lafin-javatra io rehefa mifidy karazana?
- Fa kosa tokony hojerena manokana ny kalitaon'ny masomboly, raha tsy izany dia sarotra be ny manisa valiny tsara amin'ny vanim-potoana rehetra.
Tags: VegaGalaColomboMadeiraRed scarlettovy
McCain mikasa ny hanokatra zavamaniry ho an'ny famokarana fries frantsay any amin'ny faritr'i Tula
Herinandro Agrarianian'i Siberia miandry anao!